Wasiirka Amniga DFS oo saxiixay heshiis dib loogu dhisayo ciidamada policeka soomaaliyeed. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Wasiirka Amniga DFS oo saxiixay heshiis dib loogu dhisayo ciidamada policeka soomaaliyeed.
Wasiirka Amniga DFS oo saxiixay heshiis dib loogu dhisayo ciidamada policeka soomaaliyeed.
June 11, 2018 - By: Mohamud Nadif
Maxamed Abuuker Ducaale Islow Wasiirka Amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta la saxiixday heshiis dib loogu dhisaayo ciidamada policeka soomaaliyeed ee heer federal iyo maamul goboleedba Peter De Clercq oo ah ku-xigeenka Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey u Qaabilsan arrimaha Soomaaliya.
Munaasabada Heshiiskaan lagu saxiixayay oo ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay taliska ciidamada Policeka soomaaliya, Wasiirka Aminga Qarank , wasiirada heer maamul goboleed, wakiilo matalayay maamulka gobolka banaadir iyo xubno ka socday beesha Caalamka.
Dib u dhiska ciidamada ayaa la sheegay in ay ku baxayso 40 million oo dollar taasi oo ay bixin doonaan wadamada Midowga Yurub, ingiriiska iyo wadanka Germany oo isagu ka mida wadamada midowga yurub balse si gaara u taageera ciidamada policeka soomaaliya.
Dawlada Federaalka ayaa horay u balan qaaday in ay taageeri doonto dib u dhisbaaxad leh oo lagu sameeyo ciidamada policeka sigaarana ay maamul gobleedyada uga saacidi doonaan hab farsamo iyo mid dhaqaaleba.
January 22, 2019 By HORSEED STAFF
January 22, 2019 By Abdirisak Faamoos
January 22, 2019 By Mohamed Jeenyo
Ra’iisul wasaare Kheyre oo qaabilay safiirka Indonesia ee Somalia-Sawiro
Baarlamanka Puntland oo Ogolaaday in dib loo dhigo waqtiga magacaabista golaha wasiirada.
January 22, 2019 By Mohamud Nadif